Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. खेलकुद – Emountain TV
एजेन्सी, १६ जेठ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले यसै वर्ष तय भएको आईसीसी टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट आयोजनाबारे आगामी जुन १० तारिख पछिमात्र अन्तिम निर्णय गर्ने भएको छ । विश्वभर महामारीको…
एजेन्सी, १५ जेठ । गत वर्ष नेपालमा सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका पदक विजेता तीन पाकिस्तानी खेलाडी डोपिङमा परेका छन । गत वर्षको मंसिर १५ देखि २४ सम्म…
एजेन्सी, १५ जेठ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीको नयाँ अध्यक्ष चयनबारे आज निर्णायक छलफल हुने भएको छ । आईसीसीको बुधबार बसेको बैठकले नयाँ अध्यक्ष चयन र निर्वाचनबारे आज ठोस छलफल…
एजेन्सी १४ जेठ । जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा लिग लिडर बायर्न म्युनिखले साँघुरो जित निकालेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबीच जारी लिग अन्तर्गत मंगलबार राति बायर्नले बोरुसिया डर्टमण्डलाई १–० गोल अन्तरले पराजित…
एजेन्सी, १३ जेठ । सन्दीप लामिछाने र कुशल मल्ल २० वर्ष मुनिका उत्कृष्ट क्रिकेट खेलाडीको सूचिमा परेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट प्रकाशित हुने पत्रिका ‘द नेशनल’ले सार्वजनिक…
एजेन्सी , ११ जेठ । स्पेनिस ला लिगा फुटवलको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ । स्पेनिस सरकारले ला लिगा आगामी जुन ८ तारिखबाट सुचारु गर्न अनुमती दिएपछि खेल तालिका सार्वजनिक…
एजेन्सी, ११ जेठ । कोरोना भाईरसको महामारीबीच जारी जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा वायर्न म्युनिखले सहज जित निकालेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा वायर्नले फ्रान्क फर्टलाई ५–२ गोल अन्तरले पराजित गरेको…
एजेन्सी, ११ जेठ । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा थप दुई कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । कोरोनाको पछिल्लो परिक्षणको क्रममा फरक क्लबका दुई जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो । प्रिमियर…
एजेन्सी, १० जेठ । कोरोनाका कारण स्थगित अवस्थामा रहेको विश्व क्रिकेट सुचारुका लागि अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले नयाँ गाइडलाइन सार्वजनिक गरेको छ । कोरोनापछि फर्किनका लागि विभिन्न देशले आफ्नो तयारी गरिरहेका…
एजेन्सी, ६ जेठ । इंग्लीस प्रिमियर लिग फुटबल क्लबहरुले मंगलबारदेखि सानो समूहमा प्रशिक्षण शुरु गर्ने भएका छन् । प्रिमियर लिग क्लबहरुले ट्रेनिङ प्रोटोकल सहित प्रशिक्षणमा फर्कने विषयमा सोमबार सहमति जनाएपछि…